Etu esi eme ekeresimesi oma na mba di iche?
site ha na 20-12-18
Ekeresimesi oma oma enyi m, o di ugbua na onwa iri-abuo. Ekeresimesi o di anya? Tupu ekeresimesi abia, anyi n’acho ka ogha n’iru ma choo gi oru obi uto na ezinulo obi uto n’ime afo ohuru Daalụ maka nlebara anya anyi n’ebe anyi nọ ma nwee olile anya na anyi g’enwekwu mgbanwe na 2021. Ka anyi kwuo okwu ...
Cha mma eji odida obodo nkume na uwa
site ha na 20-10-11
Maka okwute ala, ndị na-emepụta ihe na-ahụ n'anya na nka okike. Oge ochie dị mfe nke mgbaji ọkpụkpụ na usoro okike na-emebi ọganihu mbụ ahụ, nke na-eweta mmetụta ọhụụ dị ukwuu na mmetụta a na-atụghị anya ya. Nkà nke okike Nkume okike bu ihe ...
Anyị emejọrọ mí n’imeso ntụpọ okwute?
Enyi m jụrụ m otu mgbe ma ike gwụrụ m mgbe m na-etinye aka na imepụta ụlọ ọrụ okwute maka ihe karịrị afọ 20? Azịza m bụ ee, “ike gwụrụ, anaghị atụkarị ụjọ, mana ike gwụrụ nke ukwuu.” Ihe kpatara ike gwụrụ abụghị ọrụ nrụpụta dị arọ na-agwụ ike, mana usoro o ...